पूर्व शिक्षा मन्त्री पौडेलको हृदयघातबाट निधन – Chitwan Post
पूर्व शिक्षा मन्त्री पौडेलको हृदयघातबाट निधन
प्रचण्ड चितवन आउँदै
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेष्ठ ३१, २०७६
भरतपुर । जेठ ३१ हृदयघात भइ आज विहान निधन भएका पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य डिआर पौडेलको श्रद्धाञ्जलीमा पार्टी अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चितवन आउने भएका छन् । उनको ५६ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । जहाजको ढिलाइको कारण उनको आगमन ढिलो भएको चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लले बताए ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल भने आज नै चितवनको एक अर्को कार्यक्रममा आउने यस अघि नै निश्चित भएकाले ११ वजे नै भरतपुर विमानस्थल झरिसक्ने उनले बताए । डिआर पौडेल नामले बढि चिनिएका व्यक्ति थिए, पूर्व शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल । बुबा हरिप्रसाद पौडेल र आमा हिमादेवी पौडेलको कोखबाट बि.सं.२०२२ कार्तिक ४ गते तात्कालीन दरौ गा.वि.स., कुन्चेवारी, स्याङ्जामा जन्मिनुभएका पौडेल २०३७ सालदेखि वामपन्थी विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै कम्युनिष्ट पार्टीमा सक्रिय थिए ।
मोहनबिक्रम सिंह र निर्मल लामाहरुले नेतृत्व गरेको नेकपा (चौथो महाधिवेशन) को बिद्यार्थी संगठनको कार्यकर्ता हुँदै राजनीति सुरु गरेका पौडेल २०३९मा विद्यार्थी संगठनको चितवन जिल्ला सदस्य, २०४१ मा केन्द्रीय सदस्य हुँदै २०५१ मा तात्कालिन नेकपा (एकताकेन्द्र) विभाजन पछि अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को केन्द्रीय संयोजक समेत भएका थिए । २०४२ सालमा नेकपा (चौम) को सदस्यता लिएका उनले २०४४ सालमा पार्टीको चितवन जिल्ला सदस्य बने । २०४७ सालमा माडीको सितलपुरमा भएको एकता महाधिवेशनका प्रतिनिधि समेत रहेका उनी अखिल नेपाल जनवादी युवा लिगका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य समेत थिए ।
२०५१ को पार्टी विभाजन पछि निर्मल लामा र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई साथ दिएका थिए । पार्टीको बैचारिक मुखपत्र जनएकता साप्ताहिकको सम्पादक भई पत्रकारिता समेत गरेका थिए । तात्कालिन नेकपा (एकताकेन्द्र मसाल) र तात्कालिन नेकपा (माओवादी)सँग एकीकरण भएपछि बनेको एकीकृत नेकपा (माओवादी)को केन्द्रीय सदस्य भएर र पछि पोलिट्व्युरो सदस्य भए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट स्नातक, शहीद स्मृति क्याम्पस चितवनवाट आईए र माडी माविवाट एसएलसी गर्नुभएका स्व. पौडेलले माडीका अर्का दिवंगत क्रान्तिकारी नेता दिवाकर भुषाललाई आफ्नो राजनीतिक गुरु ठान्दै सादा र सरल जीवनशैली अपनाउँदै आएका थिए । हृदयघात भई निधन हुनुपूर्व दिवाकर भुसालकै स्मृति पुस्तकको सम्पादन गरेका थिए ।
दूधमा आत्मनिर्भरका कुरा
असार पहिलो साताबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण हुने
भारतमा संक्रमितको सङ्ख्या छ लाख नाघ्यो
कोरोनाबाट विश्वमा पाँच लाख १९ हजार बढीको मृत्यु
आज बिहीबार ४७३ संक्रमित थपिए
छिमेकी र आफन्तबाटै पीडितलाई न्याय दिलाउँदै आदर्श गृह
कोरोना अस्पतालमा चोरी प्रकरण : मुद्दा चलाउन नमिल्ने निर्णय !
चितवनमा देखिएका सलह तितरवितर : जोखिम कम हुँदै, सतर्क हुन जरूरी